स्थानीय चुनावको बेला कुन कलाकार कुन पार्टीमा ?
काठमाडौं । स्थानीय चुनावको बेला कुन कलाकार कुन पार्टीमा सक्रिय बनेका छन् हेरौँ :
संचारकर्मी तथा गायिका कोमल ओलीले एक वर्षअघि नै नेपालीपत्रसँगको अन्तरर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अब बिस्तारै सक्रिय राजनीतिमा लाग्नेछु’ । ओलीले त्यसबेला नै राप्रपामा प्रवेश गर्नसक्ने शंकेत देखाएकी थिइन् । अन्ततः राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशन हुनुभन्दा केही साताअघि २ दशक लामो रेडियो नेपालको जागिर छोडी सार्वजनिक सभामै पार्टी प्रवेश गरिन् ।
दोस्रो संविधानसभाअघि धुमधामका साथ एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेकी रेखा थापा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राप्रपा बनिन् । माओवादीको खुलेर बिरोध गर्दै राप्रपा ‘आफ्नै घरजस्तो’ भन्दै पार्टी प्रवेश गरेको उनले बताइन् । पार्टी प्रवेश गरेको केही सातामै भएको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पनि बनिन् । त्यसो त निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उनको नाम चर्चा भएको थियो ।
नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी गठनको क्रममा करिश्मालगायत सेलिब्रिटीसँग अन्तरंग भेटघाट गरी छलफल गरेका थिए । सोही क्रममा करिश्मा पनि राजनीति गर्न इच्छुक रहेको शंकेत दिएपछि पार्टीमा सक्रिय भुमिका सहित अहिले नयाँ शक्तिमा छिन् । करिश्माकै कारण नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गठनको क्रममा करिश्मासँगै अरु थुप्रै कलाकार नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका थिए । नयाँ शक्तिमा सक्रिय भुमिकामा रहेकी करिश्मालाई स्थानीय तहको चुनावमा कतै उम्मेदवार नबनाए पनि संसदीय निर्वाचनको बेला अघि सार्ने तयारी नयाँ शक्तिले गरिरहेको छ ।
अभिनयमा लगभग चलचित्र क्षेत्रबाटै टाढिएकी अभिनेत्री विपना थापा नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा उनी काठमाडौं महानगरपालिकामा चुनावी प्रचारमा सक्रिय छिन् । घर गृहस्थी समलेर बसिरहेकी थापा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भन्दा अघिदेखि नै कांग्रेसमा लागेकी हुन् ।
अचेल अभिनयमा निस्क्रिय रहेका नायक अशोक शर्मा पनि करिश्मा सँगै नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका हुन् । आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण नयाँ शक्ति कमजोर बन्दै गयो, शर्मा पनि पार्टीमा निस्क्रिय देखिएका छन् । तर नेता डा. भट्टराईकै अनुरोधमा शर्मा अहिले पार्टीको झापा जिल्ला इन्चार्जको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
पुराना अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाह अहिले नेपाली कांग्रेसमा छन् । तत्कालिन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाकै पालामा शाह सार्वजनिक रुपमै पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । तर नीरका लागि पार्टी प्रवेश गर्नु र छोड्नु नौलो होइन । यसअघि एनेकपा माओवादीमा रहेका शाह त्यसअघि राप्रपामा थिए ।
विभिन्न पार्टीको निकट बनेर सरकारी नियुक्ति समेत पाइसकेका शाह राजनीतिक अनुकुलता अनुसार पार्टीमा प्रवेश गर्ने र छोड्ने गर्दआएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै नायक राजेश हमाल एमालेमा प्रवेश गरेको खबरले खुबै चर्चा पायो । खासमा आफू बसेको ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताहरु भोट माग्दै आएपछि हमाल पनि केही बेर एमाले कार्यकर्ताहरुसँगै भोट माग्न प्रचारमा अभियानमा हिँडिदिएका थिए । त्यही कुरालाई लिएर हमाल एमाले प्रवेश गरेको खबर बाहिर आयो । यथार्थमा उनी पुरानै कांग्रेस हुन् । उनका भाइ नै कांग्रेसको तर्फबाट वाडा सदस्य उम्मेदवार छन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा विवादास्पद छवि भएका भुवन केसी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे । भुवनका लागि यो नौलो अनुभव थियो भने एमालेका लागि प्रचारको नयाँ फण्डा । सोही क्रममा उनले संविधानसभा सदस्य उम्मेदवरारको टिकेट समेत पाएका थिए । तर पार्टीमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि उनको टिकट नै खोसियो । भुवन भने त्यही रिसमा निर्माता उद्धव पौडेलसँगै राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए । अन्ततः एमालेका नेताहरुले सम्झाएपछि एमालेमै थामिए ।
संचारकर्मी तथा कलाकार दिनेश भने पुरानै एमाले कार्यकर्ता हुन् । पार्टीको खास भुमिकामा रहेर काम नगरे पनि निर्वाचनको बेला उनी खुलेरै पार्टीमा लाग्छन् ।लैनचौरस्थित अमृत साइन्स कलेज पढ्दाताका नै उनी एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा सक्रिय थिए । त्यही सक्रियता अझै टुटेको छैन ।